IRiverside Resort — I-One-Bed Condo - I-Airbnb
IRiverside Resort — I-One-Bed Condo
Igumbi elise- indlu ebuhotele sinombuki zindwendwe onguJoe
Indawo enkulu enegumbi elinye lokulala inegumbi lokulala elikhulu, igumbi lokutyela / lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulu yokumkanikazi kunye neTV yescreen esicaba. Igumbi lokuhlambela linebhafu enejethi yomoya. Indawo yokutyela incamathela kwikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ngobushushu obukhazimlayo bomgangatho ukuze uhlale upholile kwiinyanga ezipholileyo zasebusika. Igumbi lokuhlala elidityanisiweyo libonelela ngeendawo zokuhlala ezintathu ezinezitulo zengalo zesikhumba kunye nesofa yokutsala.
Iibhedi ezi-1 zikaKumkanikazi kumagumbi okulala ahlukeneyo
IiTV ezi-2 zescreen esicaba
Isofa yokutsala ngesikhumba (ilala umntu omnye)
Ibhafu enejethi yomoya kunye neshawari yeceramic
Nandipha ububele baseNewfoundland kubuhle beNtlambo yaseHumber. IMarble Inn Resort yinkulumbuso yaseNtshona yaseNewfoundland eneenkwenkwezi ezine ezinesiqingatha ekuchithelwa kuzo iiholide, ibonelela ngobunewunewu obuzinzileyo phakathi kweendawo ezibalaseleyo kunye nohambo lwangaphandle.
Imiswe elunxwemeni loMlambo iHumber kunye nomgama wokuhamba ukuya kwiNtaba yeMarble, i-adventure iqala kwiMarble Inn Resort. Chitha usuku siphosa umgca kwiidokhi zethu, sihamba kufutshane neendlela, sibheqa kwiingxangxasi ezincinane okanye sityibiliza kwiNtaba yeMarble kwaye sivumele abasebenzi bethu ukuba banyamekele abanye. Into ekufuneka uyenzile kukuhlala emva kwaye wonwabele umbono.
Abasebenzi bethu bendawo ekuchithelwa kuyo iiholide baya kufumaneka ukuze bancedise kuyo nayiphi na imiba okanye imibuzo.